Cinegif: Naqshadeynta Shaleemooyinka iyo Gifyada Animated | Martech Zone
Cinegif: Naqshadeynta Filimaanta iyo Gifyada Animated
Sabti, Sebtember 21, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
In kasta oo fiidiyowgu uusan ciyaarin macaamiisha emaylka casriga ah, wali waad ku qabsan kartaa dareenka dhagaystayaashaada gifs firfircoon. A gif si fiican loo qaabeeyey ayaa kordhin kara adiga ku soo dir email-ka qiime-guji adigoo u maraya laba lambar oo waxay u muuqdaan kuwo cajiib ah oo ku saabsan websaydhkaaga celcelis ahaan adigoon kaxayn dadka booqda. Soo-booqdayaashu uma baran inay arkaan dhaqdhaqaaq dahsoon oo sawir ah oo ku jira ama ku dhex jira waxyaabaha ku jira biraawsarka illaa ay gujinayaan badhanka ciyaarta.
Su'aasha naqshadayaashu waxay tahay sidee buu qof ugu kacaa sameynta iyaga? Waxaad gabi ahaanba ka faa'iideysan kartaa qalab sida Photoshop oo aad abuuri karto animation adoo ka soo jiidaya muraayadaha fiidiyowga… laakiin taasi waxay qaadan kartaa xoogaa shaqo ah. Taasi waa halka ay Cinegif ka timaado - madal si gaar ah loogu dhisay abuurista gifs firfircoon.
Xaddidaadda kaliya ee ka socota barxadda Cinegif (oo aan rajaynayo inay beddelaan) waxay kaliya oggol yihiin cabirrada illaa 600 pixels ballaaran iyo 600 pixels dheer.
Sida webka, gifs animated waxaa loo isticmaali karaa Warbaahinta Bulshada ee Twitter iyo Google+ (laakiin ma aha Facebook… booo). Google+ xitaa waxay u oggolaaneysaa dhacdooyinka iyo daboolida sawirrada. Gift-yada Animated-ka ayaa sidoo kale ka shaqeeya PowerPoint iyo Muhiimka… udgoon soo bandhiggaaga soo socda. Iyo sida MMS u noqoto mid guud, gifs firfircoon ayaa sidoo kale lagu diri karaa farriimaha qoraalka ah ee IOS iyo Android!
Waxa kale oo aad iibsan kartaa saamiyada Cinegifs.
Tags: firfircoonaanta gifanimationcinegifcinwaankagif
Kordhi Gaadiidka Canshuurta ee Bakhaarka iyo khadka tooska ah ee 'FATWIN'
Woopra: Waqti-dhab ah, Falanqeyn Macaamiil Wax-qabad leh